Qorshihii Farmaajo u magacaabay Yaasiin Farey oo fashilmay | KEYDMEDIA ONLINE
Qorshihii Farmaajo u magacaabay Yaasiin Farey oo fashilmay
Kooxda Farmaajo, waxa ay abuurayaan fowdo siyaasadeed, taas oo ay ku doonayaa in Caasimaddu mar kale marti aliso dagaallo kharaar, si uu mesha uga baxan eedaha loo heysto hoggaankii hore ee NISA.
MUQDISHO, Soomaaliay – Sida ay xaqiijiyeen ilo-Sirdoon, Farmaajo ayaa ku hungoobay hirgalinta qorshe uu ku doonayay inuu ku tirtiro raadadka kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo ku maqan gacanta hoggaankii hore ee NISA, oo uu ugu horreeyo eedeysane Fahad Yaasiin.
Si loo duugo dhamaan raadadka la xariira kiiska Ikraan, Farmaajo ayaa 7/9/2021, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Farey), u magacaabay in uu si ku-meel gaar ah u hoggaamiyo Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, hayeeshee, qorshahaas ayaa dhicisoobay kadib markii Farey loo diiday inuu la wareego xarunta NISA ee loo yaqaan Habar Khadiijo.
Qorshaha ay Fahad iyo Farmaajo u xil-saareen Farey, ayaa ahaa inuu baabi’iyo dhamaan xogaha muhiimka ah ee yaalla Xaafiiskii Fahad Yaasiin, gaar ahaan kuwa la xariira kiisaska dilalka oo ay ugu horreeyaan waraaqaha ay ku xusan yihiin warbixinnada Ikraan Tahliil.
Sidoo kale, waxaa Farey loo xil-saaray, inuu meel kale u wareejiyo hub bastoolado u badan oo yaalla gudaha xarunta Nabad-sugidda, waxaana la faray inuu hanjabaad iyo digniinno cabsi galin ah u diro saraakiisha NISA, kuna amro in ay joogjiyaan amar ka qaadashada Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Rooble.
Qorshahaas magacaabidda Farey, ayaa sidoo kale, looga gol-lahaa, in lagu hor istaago baaritaannada Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida iyo Xeer ilaaliye Buula-kamey ku yahaan shaqsiyaadka dacwadu ka furan tahay ee Fahad, Farey, Kullane iyo Wadne-qabad.
Hayeeshee, qorshahaas ayaa ku soo idlaaday fashil, kadib markii ciidamada ilaaliya Xarunta NISA, ee loo yaqaan WARAN, ay ka hor yimaadeen in Yaasiin Farey iyo kooxdiisu la wareegaan Taliska hay’adda.
Sida ay Keydmedia Online u sheegeen saraakiil ka tirsan NISA, Ra’iisul Wasaaraha, ayaa 6/9/2021, ku war galiyay taliyaha ciidanka Waran ee hay’adda NISA, oo lagu magacaabo Maxamed Xasan, inuu masuul ka yahay xafiiskii agaasimaha NISA, xafiiska diiwaanka iyo xogaha, xafiiska maaliyadda iyo qeybta hubka ee xarunta, taas ayaana sababtay in Ferey uu gudaha u gali waayo Habar Khadiiijo.
Farmaajo ayaa geed dheer iyo mid gaaban u koraya siduu u dabooli lahaa kiiskaan, taas oo uu uga gol-leeyahay inuu gacmaha cadaadda ka badbaadiyo eedeysane Fahad Yaasiin oo la rumeysan yahay inuu masuul ka yahay af-dubka iyo dilka Ikraan, wuxuuna wali isku dayayaa in Koodiisu galaan gudaha Xarunta NISA, si ay u baabi’iyaamn raadadka kiiska Ikraan.
Kooxda Farmaajo, waxa ay abuurayaan fowdo siyaasadeed, taas oo ay ku doonayaan in Caasimaddu mar kale marti galiso dagaallo kharaar, si uu mesha uga baxan eedaha loo heysto hoggaankii hore ee NISA.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa 6-dii bishaan shaqada ka joojiyay Agaasimihii Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxa uuna si KMG ah Agaasimaha guud ee NISA ugu magacaabay Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac (Goobe), kaas oo aan wali la wareegin taliska.